ပါတီမိတျဆကျ (ရခိုငျပွညျနယျအမြိုးသားအငျအားစုပါတီ) – Voice of Myanmar
အငျအားနညျးပမေယျ့ အားကွီးသူတှနေဲ့ မိတျဖှဲ့ထားလို့ အားမငယျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအမြိုးသားအငျအားစုပါတီ
လာမယျ့ ၂၀၂၀ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ ရှေးကောကျပှဲမှာဝငျပွိုငျမယျ့ ရခိုငျပွညျနယျအမြိုးသားအငျအားစုပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးအေးကွိုငျ ကို ဗီအိုအမျရဲ့ နိုငျငံရေးပါတီမိတျဆကျကဏ်ဍအတှကျ ဗီအိုအမျသတငျးထောကျ မလဲ့လဲ့ဝငျးက မေးမွနျးထားတာဖွဈပါတယျ။
VOM – ပါတီအနနေဲ့ ဝငျပွိုငျမယျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ အရအေတှကျဘယျလောကျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုတငျထားလဲ?
ဦးအေးကွိုငျ- ရခိုငျပွညျနယျမှာ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၆ ယောကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
VOM – ပါတီရဲ့ ကတိကဝတျက ဘာတှဖွေဈမလဲ?
ဦးအေးကွိုငျ- အကယျ၍ ကနျြတျောတို့ လှတျတျောမှာပါဝငျခှငျ့ရှိရငျ ရခိုငျပွညျနယျအနနေဲ့ တောငျသူလယျသမားအခနျးကဏ်ဍနဲ့ပတျသကျ လို့လုပျကိုငျ‌ဆောငျရှကျမှုတှေ အားနညျးခကျြရှိတယျ။တဈခွားနိုငျငံက တောငျသူလယျသမားတှနေဲ့အခြိတျအဆကျလုပျပွီးလို့ရှိရငျ,နောငျလာမဲ့အနာဂတျမှာ လကျရှိအခြိနျထကျ တောငျသူလယျသမားတှရေဲ့ လုပျကိုငျဆောငျရှကျမှုတှေ ပိုမိုမွငျ့မားလာအောငျ၊ နောကျတဈခုက အခုလကျရှိအခွအေနမှောက တောငျသူလယျသမားတှရေဲ့လုပျကိုငျမှု၊ ကုနျကမြှုနဲ့ ဝငျငှရေရှိမှုက ဆကျစကျတာမတှရေ့ဘူး။ တောငျသူလယျသမားတှရေဲ့ ရရှိလာမဲ့ ဝငျငှနေဲ့ ကုနျကစြရိတျအပျေါမှာ တှကျခကျြပွီး မိသားစု စားဝတျနရေေး အခွခေိုငျနိုငျအောငျ ရောကျရှိမယျ့အနထေားမြိုး ဖနျတီးသှားဖို့ စဉျးစားခကျြတှရှေိတယျ။
VOM- အာဏာရပါတီနဲ့ တခွားပါတီတှကေို ဘယျလိုအငျအားတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျသှားမလဲ?
ဦးအေးကွိုငျ- အစိုးရပါတီနဲ့မပွိုငျနိုငျဘူး၊ ဒါပမေယျ့ အခုလကျရှိ ၂ပါတီနဲ့ အလုပျတှကေိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျတဲ့အနနေဲ့လုပျတာ။ ဒီအပျေါမှာ နောကျ၂၀၂၁ ခုမှာလညျး အလုပျပူးပေါငျးဆောငျရှကျပွီး တကျနိုငျသလောကျ လုပျသှားမှာပါ။
VOM- ပါတီဝငျအငျအား ဘယျလောကျရှိလဲ
ဦးအေးကွိုငျ- ၁ သိနျး ၉ သောငျးလောကျရှိခဲ့တယျ။ လကျရှိအခွအေနမှောကတော့ ရခိုငျပွညျနယျအခွအေနကေို အားလုံးသိကသြလို ဒီအပျေါမှာ ကြှနျတျောတို့က ပါတီရဲ့လကျရှိက ဘယျလောကျရှိနိုငျလဲ ကှငျးဆငျးစဈဆေးမှု ကြှနျတျောမလုပျနိုငျဘူးဖွဈနတေယျ။
VOM- ရခိုငျပွညျနယျရဲ့ တိုကျပှဲအခွအေနနေဲ့ COVID-19 ဖွဈနလေို့ မဲပေးရခကျတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျတှကေို ဘာပွောခငျြလဲ
ဦးအေးကွိုငျ- အခု ရခိုငျပွညျနယျအခွအေနကေတော့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး လှတျလပျပွီး တရားမြှတအောငျ လုပျကိုငျဆောငျရှကျပွီးမှ တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ အားနညျးခကျြရှိနိုငျတယျ။
VOM – ပါတီရဲ့ဆောငျပုဒျတှကေဘာတှလေဲ
ဦးအေးကွိုငျ- ခတျေမီဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ သဇငျနှဈခကျပါတီကိုမဲပေးစို့။
ဦးအေးကွိုငျ- ၂၀၁၅ မှာ ၁၈ ယောကျပွိုငျတယျ မနိုငျခဲ့ပါဘူး။
အင်အားနည်းပေမယ့် အားကြီးသူတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ထားလို့ အားမငယ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအေးကြိုင် ကို ဗီအိုအမ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီမိတ်ဆက်ကဏ္ဍအတွက် ဗီအိုအမ်သတင်းထောက် မလဲ့လဲ့ဝင်းက မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
VOM – ပါတီအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်ဘယ်လောက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ထားလဲ?
ဦးအေးကြိုင်- ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆ ယောက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VOM – ပါတီရဲ့ ကတိကဝတ်က ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
ဦးအေးကြိုင်- အကယ်၍ ကျန်တော်တို့ လွှတ်တော်မှာပါဝင်ခွင့်ရှိရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက် လို့လုပ်ကိုင်‌ဆောင်ရွက်မှုတွေ အားနည်းချက်ရှိတယ်။တစ်ခြားနိုင်ငံက တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့အချိတ်အဆက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်,နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ လက်ရှိအချိန်ထက် တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပိုမိုမြင့်မားလာအောင်၊ နောက်တစ်ခုက အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာက တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့လုပ်ကိုင်မှု၊ ကုန်ကျမှုနဲ့ ဝင်ငွေရရှိမှုက ဆက်စက်တာမတွေ့ရဘူး။ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ရရှိလာမဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်မှာ တွက်ချက်ပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေး အခြေခိုင်နိုင်အောင် ရောက်ရှိမယ့်အနေထားမျိုး ဖန်တီးသွားဖို့ စဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်။
VOM- အာဏာရပါတီနဲ့ တခြားပါတီတွေကို ဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားမလဲ?
ဦးအေးကြိုင်- အစိုးရပါတီနဲ့မပြိုင်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ ၂ပါတီနဲ့ အလုပ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တာ။ ဒီအပေါ်မှာ နောက်၂၀၂၁ ခုမှာလည်း အလုပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တက်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမှာပါ။
VOM- ပါတီဝင်အင်အား ဘယ်လောက်ရှိလဲ
ဦးအေးကြိုင်- ၁ သိန်း ၉ သောင်းလောက်ရှိခဲ့တယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကို အားလုံးသိကျသလို ဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့က ပါတီရဲ့လက်ရှိက ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
VOM- ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေလို့ မဲပေးရခက်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ဘာပြောချင်လဲ
ဦးအေးကြိုင်- အခု ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ အားနည်းချက်ရှိနိုင်တယ်။
VOM – ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေကဘာတွေလဲ
ဦးအေးကြိုင်- ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ သဇင်နှစ်ခက်ပါတီကိုမဲပေးစို့။
ဦးအေးကြိုင်- ၂၀၁၅ မှာ ၁၈ ယောက်ပြိုင်တယ် မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။